मेकअप टिप्स: अनुहारको आकार अनुसार मेकअप कसरि गर्ने ?
प्राय रंगीन उज्यालोमा अनुहारको रंग फेरिएको देख्नुभएको नै होला । तर, के हल्का रंग बिना मेकअपकको छायाँ फेरिएको देखिररहनुभएको छ ? विवाह र भोजहरुमा कसैको अनुहारमा परिवर्तन भएको देखेर अचम्म मान्नुपर्दैन । यो त बहु–शेड मेकअपको कमाल हो । जुन अनुहारमा मेकअपको छायाँ भित्र हुन्छ । यो मेकअप गरेका व्यक्तिहरु सामाजीक मिडियामा खुब आर्कषक देखिन्छन् ।
लिपस्टिक बाट फाउन्डेसन सम्म
मेकअप राम्रो हुनुमा ब्युटी प्रडक्टमा आधारित हुन्छ जो अनुहारमा लगाउदा वित्तिकै विस्तारै विस्तारै रंग परिवर्तन हन थाल्छ । हरेक तरहको कस्मेटिक प्रोडक्टमा फरक फरक बनावट हुन्छ । विशेष गरी लिपस्टिक यस्तो चीज हो जसले अनुहारको प्रकुतिको मूल्यमा निर्भर गदै रंग परिवर्तन गर्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न रंग, र छालामा लिपस्टिकको छायाँ पूर्ण रुपमा भित्र हुन्छ यस्ता सांैन्र्दय उत्पादनहरुलार्ई जादु सौंन्दर्य उत्पादनहरु पनि भनिन्छ ।
बदल्छ अनुहारको रंग
मेकअपको लागी यस तरहको कस्मेटिक्सको अलावा रंगिन कानको रिङ, चमक र सुनका उपयोग गर्न सकिन्छ । जुन दिन वा लाइटको परिवर्तन गर्नाको साथै फरकफरक रंग अनुहारमा दिन्छ । ओठबाट लिएर आँखा सम्म यी चिजबाट रंग परिवर्तन मेकअप पाउन सकिन्छ । यो विधि विवाहमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले मेकअपको लोकप्रियता सामाजिक संजालको कारणले बढि भएको पाइन्छ । पहिले व्यक्तिहरु पार्टी र विवाहमा स्टडेड मेकअप गर्थे तर आजभोली आफ्नो रंग परिवर्तनको लागी इस्टाग्राम प्रयोग गरिरहेका छन । तर पनि मानिसहरु सुपर मेकअप गर्न चाहान्छन तर सामाजिक संजालमा र फेशन ब्लगमा यस्ता खाले मेकअप देख्न पाइन्छ ।
सन्तुलित मेकअपबाट सौन्दर्य झल्काउने तरिका
मेकअप गर्नुृ भनेको तपाँइको अनुहारको सुन्दर भागलाई अझ हाईलाइट गर्नु हो र बेकारको भाग लुकाउनु पनि हो । यसले अनुहारको आकार परिर्वतन गर्न सक्दछ ।
यदि तपाई अनुहारको आकार परिर्वतन गर्नु हुन्छ भने ंआफुलाई निकै फरक पनि पाउनुहुनेछ । तपाँइको डबल चिन, बाक्लो नाक र चौडा निधार बाट पनि चिन्तीत हुनुहु्न्छ भने यो तरिका अपनाउनुस् होस् कन्टोरिंगको बारेमा सहि तरिकाले जान्नुहोस सन्तुलित मेकअपले तपाईँको सुन्दरताका साथै ग्ल्यामरस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
तपाईँको अनुहार गोलाकार छ भने गालाको हड्डीहरु कम बलियो छन । सन्तुलित मेकअप गर्दा अनुहार एकदम बेजोड राम्रो देखाउन सकिन्छ । यसैले गालामा श्रृगार गर्नुहोस् ।
यदि तपाईको अनुहार मुटु आकारको छ भने सन्तुलित मेकअप टाउकोको किनारमा, निधार र गालामा हुनुपर्दछ । यसले अनुहार एकदम आर्कषक देखिन्छ ।
यस्तो अनुहारहरुको निधार ठुलो छ र रेखा पनि ठुलो छ भने यो अवस्थामा सन्तुलित मेकअप निधार माथी र गालाको दुबै छेउमा गर्नुपर्दछ । यसले तपाईको छालामा उज्यालो र आर्कषक बनाउनेछ ।
यदि तपाइको अनुहार नास्पाती आकारको छ भने तपाईको गालाको हड्डीहरु ठुला र निधार चौडा हुनुपर्छ । तपाईले हाइलाइटर र सन्तुलित मेकअप को प्रयोग गरेपछि गालामा चमक आउनुका साथै निधारमा केही छायाँ पनि देखिन्छ ।